Steam Game Mutambo: Wagadzirira zvemitambo here? | Linux Vakapindwa muropa
Steam Game Mutambo: Wagadzirira zvemitambo here?
Zvimwe? Hongu imwe Steam Mutambo Mutambo 2020. Saka kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo, iwe unofanirwa kunge uchigadzira nzvimbo pane yako hard drive uye gadzirira zvese zvemutambo wekutamba uyu. Chishamiso chechokwadi chevatambi. Uye ndezvekuti mushure mekubudirira kwechiitiko chaJune, ichadzokororwa neround nyowani pakupera kwegore rino, muna Gumiguru.
Saka zvese Vashandisi veSteam vatengi Vatambi veValve vanozogona kutamba kuburikidza netoni yemavhidhiyo mutambo madhimoni kwenguva yakati rebei. Mahara emafaro kune wese munhu, zano hombe rakatanga muna Zvita 2019 uye rakagamuchirwa kwazvo. Panguva iyoyo yakaitwa kuti iperekedze Iyo Game Mubairo, asi nekuda kwezvainofarira, yakaenderera ichidzokororwa.
Iye zvino iro boka reSteamworks rekuvandudza rakasimbisa kuti misi yechiitiko ichave iri Gumiguru 7-13. Uye zvakare, Valve akataura kuti ivo munguva pfupi vanozovhura kunyoreswa kwevagadziri vanoda kutora chikamu muchiitiko ichi. Mukana wakanaka wekuratidza demo rebasa uye uwane vatambi vakawanda kuti vaone basa rako.
Vagadziri ava havana nguva yakawanda, sezvo kunyoreswa kuchizovhurwa chete pakati paAugust 19 na26. Uye zvakare, kuve anokodzera mazita, emitambo yemavhidhiyo anofanirwa kuve nezuva rekuburitsa rakaiswa pakati paGumiguru 13, 2020 naMay 1, 2021.
Sezvakaitika mune yekupedzisira Steam Game Mutambo chiitiko, ino nguva ichave zvakare ichave rarama nhepfenyuro, zvikamu zvemibvunzo nemhinduro, nezvimwe.
Uye kana iwe uchifarira rudzi urwu rwezviitiko zvevaraidzo zveLinux uye mamwe mapuratifomu, iwe unofanirwa kuziva kuti Valve zvakare akazivisa zvimwe Steam Game Festivals yeramangwana. Muna 2021 pachavewo navo, asi parizvino isu tinofanirwa kumirira kuti rumwe ruzivo ruratidzwe. Zvinotaridza kuti chichava chinhu chinowanzoitika gore rimwe nerimwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Game Mutambo: Wagadzirira zvemitambo here?
Linux App Summit: izvo zvaunoda kuziva nezve chiitiko
Debian anopemberera makore makumi maviri nemanomwe ari ekugovana kwakanyanya